I-Evander Holyfield vs Bert Cooper | Ukuza ekhaya eHolyfield
I-Evander Holyfield vs Bert Cooper ividiyo ye-23/11/91
Ividiyo ye-Evander Holyfield vs Bert Cooper. Olu khuselo lobunzima bobuntshatsheli lwenzeka nge-23/11/91 kwaye yayingu-Holyfield U-Cooper wayengumchasi wesithathu okhethiweyo, emva kukaMike Tyson emva koko UFrancesco Damiani kwafuneka ukuba aphume, bobabini ngokonzakala.
Ngomhla womlo, i-Holyfield yayiyintandokazi enkulu yokubheja ngaphezulu kwe-Cooper, kodwa u-Cooper wamangalisa bonke ngokuthatha ithuba lakhe ngezandla zozibini.
U-Cooper wayephantsi kwinqanaba lokuqala kodwa walwa ngokukhalipha, ukuya kwinqanaba lesithathu, UKoper ubeka isandla sasekunene kwintloko kaHallfield eyothusile intshatsheli. U-Cooper emva koko wafumana i-Holyfield ngokuchasene neentambo kwaye wawisa umdibaniso obandakanya isandla sasekunene ngasemva kwentloko ye-Holyfield. Ngaphambi kokuba i-Holyfield iwele kwilaphu, wayibamba intambo ephezulu ukuzigcina ephakamile. Ngaphandle kokungabethi phantsi, usompempe uMills Lane wayibiza ngokuba yinkqonkqozo, eyokuqala kwikhondo lobungcali e-Holyfield.
Emva kwemijikelo emithathu, i-Holyfield iphelise umlo kade kumjikelo 7. Nge-20 yesibini ukuya kumjikelo, i-Holyfield yabetha u-Cooper ngokudibanisa okude. Nangona u-Cooper engazange wehle, wayengasakwazi ukuzikhusela, ebangela ukuba uLane ayeke umlo ngemizuzwana emibini eshiye umjikelo kwaye anike u-Holyfield uloyiso nge knockout yobuchwephesha.
"Smokin" Bert Cooper (ekuqaleni wayeqeqeshwe nguJoe Frazier) kwaye wathatha umhlala phantsi kunye nerekhodi yomdlalo wamanqindi wama-38-25, 31 KO's ongathetheleli ukuba leliphi igorha elinobunzima lizise umsesane. Wayekhathazwa 'yimicimbi' eyayithintela uqeqesho lwakhe kwaye ekugqibeleni waba ngumdlalo wamanqindi. Ukuba wayezinikele ngakumbi, engaguquguquki kwaye egxile, uya kuphumelela okuninzi ngakumbi. Into azakukhunjulwa ngayo ngamadabi awayewenza, uninzi lwabakhuphisana 'lonyaka.'
Amanye amadabi abalulekileyo awayebandakanyekile kuwo, uMichael Moorer, uRay Mercer kunye nabanye abaninzi. Eminye yale milo ungayifumana kwikhathalogu yethu yokulwa ngaphandle kwentengiso kule webhusayithi.
Ngokudabukisayo, uBert Cooper wayenomlo wakhe wokugqibela wokulwa nomhlaza wepancreatic kwaye wasweleka nge-10/5/19, "umsi" ekugqibeleni wacinywa esemncinci eneminyaka engama-53. Ngamana angaphumla ngoxolo.
Khumbula ukuphonononga ngokupheleleyo iwebhusayithi yethu yamanqindi. Ineendaba zamanqindi zamva nje, iziphumo zomdlalo wamanqindi, iividiyo zomdlalo wamanqindi kunye nomxholo wamanqindi ongakumbi owongezwa mihla le.